Xukuumadda Raafidada Ciraaq oo Shaqada Ka Ceyrisay 500 Oo Saraakiil ah.
Wednesday April 01, 2015 - 13:19:40 in Wararka by Super Admin
Xukuumadda Ciraaq ee shiicada ah ayaa shaqada ka ceyrisay ilaa 500 oo sarkaal kuwaasoo loo haysto inay isaga carareen dagaaladii mujaahidiinta lagula galay gobolka salaaxudiin.
Masuul u hadlay booliska Ciraaq ayaa sheegay inay shaqadii ka ceyriyeen mushaarkiina ka goosteen 500 oo sarkaal Iyo rag la shaqeynayay oo dhammaantood ka howl galayay gobolka Anbaar isagoo ku sifeeyay raggaas inay ka tageen waajibkooda ayna ka ordeen dagaaladii Mujaahidiinta ay ku qabsadeen inta badan gobolkaas.
Taliyaha booliska gobolka Anbaar gaashaanlaha lagu magacaabo Kaadim Al Fahdaawi oo isaguna la hadlay wakaaladda wararka lagu magacaabo Anaadool ayaa sheegay in wasaaradda arimaha gudaha xukuumadaas ay shaqadii ka ceyrisay saraakiil iyo kooxaha deg dega oo ka shaqeynayay naaxiyatul Baqdaadi oo 90 KM u jirta caasimadda waddankaas.
Al Fahdaawi ayaa hadalkiisa kusii daray saraakiisha shaqada laga fariisiyay ee ka shaqeynayay Naaxiyatul Baqdaadi ay iminka ku dhuumaaleysanayaan caasimadda waddanka,Barwaan Xadiitha Iyo magaalooyin kale isagoo kusii daray inay sii dheertahay cabsi laga qabo in la beegsado inkastoo buu yiri odayaasha ay heyb ahaan kasoo jeedaan ay wadaan waan waan ay dib usoo howl galinayaan.
Ciidanka Iyo Saraakiisha Raafidada Ciraq Iyo Iiraan ayaa ka kala carayay furimaha la isku hor fadhiyo ee wilaayada Salaaxudiin kadib markii ay wax horu mar ah ka gaari waayeen dagaalada socda,ayna ku waayeen saraakiishii ugu muhiimsaneyd ee dagaalka hoggaamnieysay.
Janaraalka Iiraaniga ah ee lagu magacaabo Qaasim Suleymaan oo ah abaanduulka gadaal ka taagan dagaalada socda ayaa u cararay Tehraan kadib markii uu waayay xubnihii garbihiisa ahaa ee dagaalka kula jiray.